मिडिया – Page2– MySansar
के छापियो गोरखापत्रमा त्यस्तो अनलाइनबाट डिलिटै गर्नुपर्ने गरी?
Posted on December 9, 2021 December 9, 2021 by Salokya
गोरखापत्रको यो लिङ्कमा (क्लिक गर्नुस्) हेर्नुभयो भने तपाईँले देख्नुहुनेछ Sorry No Data Available !!! लेखिएको। यसको अर्थ हो, त्यहाँ पहिले केही थियो, पछि डिलिट गरियो। झट्ट हेर्दा त्यसो मात्र देखिने हो। तर खासमा यसको पछाडि रमाइलो कहानी रहेछ। देशसञ्चारमा यसबारे समाचारै आएको छ- बालुवाटारको खप्कीपछि गोरखापत्रमा छापियो देउवाको ‘स्तुति’मा ‘क्षतिपूर्ति आर्टिकल’ शीर्षकमा।
पत्रकारिता कि अनुमानकारिता : समाचारको नाममा जे लेखे पनि हुने ?
एमालेको चितवनमा भइरहेको महाधिवेशनका बेला एउटा समाचार अहिले सामाजिक सञ्जालतिर भाइरल बनेको छ। “चितवनमा इतिहासमै सबैभन्दा बढी गर्भनिरोधक अस्थायी साधनको माग” शीर्षकको यो समाचार सबैभन्दा पहिला शनिबार, ११ मङि्सर २०७८ गते नेपाल आज नामको अनलाइनमा प्रकाशित भएको हो। त्यसपछि अरु अनलाइनहरुले पनि यसलाई जस्ताको तस्तै कपिपेस्ट गरेका छन् भने फेसबुकमा एउटा छापा माध्यममा समेत यो… Continue reading
चौरजहारी जहाज काण्ड : गल्ती कसको ? एयरलाइन्सको, पाइलटको कि मिडियाको?
Posted on November 24, 2021 November 25, 2021 by Salokya
प्लेन उड्दै थियो। उड्दाउड्दै पाइलटको ड्युटी आवर सकियो। त्यसपछि लानुपर्ने ठाउँमा नलगी पाइलटले प्लेनलाई डाइभर्ट गरेर अर्कै ठाउँमा झारे। यस्तै खालका समाचार भाइरल भएको थियो हिजो। तर साँझ पर्दा नपर्दै त्यस्ता समाचारमा केही गल्ती भएको खुल्यो। अधिकांश समाचारहरुमा लेखिए जस्तो जहाज रुकुमको चौरजहारी विमानस्थलका लागि उडेको होइन रहेछ। त्यो एयरपोर्ट त धेरै भइसक्यो बन्द भएको।… Continue reading
चौरजहारी विमानस्थलमा यसरी डुबेछन् मिडिया
Posted on November 23, 2021 November 25, 2021 by Salokya
आज एउटा समाचार एकदमै चर्चामा आयो- नेपाल वायुसेवा निगमको एक जना पाइलटले रुकुमको चौरजहारी पुर्‍याउनु पर्ने विमान ड्युटी सकियो भनेर नेपालगञ्जमै झारेछन् रे। अलि अनौठो खालको खबर भएकोले सबैको ध्यान तानियो। एउटाले लेखेपछि अर्कोले पनि लेख्यो। हुँदाहुँदा भएभरका मिडियामा एउटै कुरा देखियो। तर खासमा पाइलटले मात्र एक ठाउँमा पुर्‍याउनु पर्ने जहाज अर्को ठाउँमा लगेका होइन… Continue reading
नेपालमा अनुमति नै नलिई प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु र नेताहरुको लर्को लगाएर भारतीय योगगुरु रामदेवले दुई वटा टेलिभिजनको उद्घाटन गरेको बारे चर्चा चलेको छ। प्रधानमन्त्रीले नै गैरकानुनी टेलिभिजनको उद्घाटन गर्ने हो त भनेर प्रश्न पनि हाम्रा मिडियामा उठाइएका छन्। तर यहाँ मैले चाहिँ उद्घाटन भएको आस्था नेपाल टिभी र पतन्जली नेपाल टिभीको नभई रामदेवको हातमा भारतको… Continue reading
यसपालि दशैँतिहारको चाडवाडमा मिडिया साहुहरुलाई फाइदै भो। तपाईँहरुले पनि याद गर्नुभयो होला, चल्तीका कति पत्रिकाहरुले ज्याकेट ओढेका थिए। फ्रन्टपेजमा समाचारको साटो विज्ञापन देखिनुलाई ज्याकेट लगाएको भन्छन् प्राविधिक भाषामा। यस्तो ज्याकेट अधिकांश मदिरा कम्पनीहरुका थिए। अनलाइनहरुमा पनि क्लिक गर्ने बित्तिकै समाचार नदेखेर यस्तै मदिराका विज्ञापन देखेको पनि धेरैले याद गर्नुभयो होला। मिडियाले विज्ञापन पाउनु राम्रै कुरा… Continue reading
-किशोर नेपाल- समाचारको रोचक प्रस्तुति र निर्भीकताका कारण देशान्तर साप्ताहिक बन्धुले र मैले सोचेभन्दा निकै कम समयमा लोकप्रिय हुन थालेको थियो । हामी जतिसुकै निष्पक्ष हुन खोजे पनि पाठकले हामीलाई काङ्ग्रेसको आधिकारिक समाचार दिने काङ्ग्रेससँग निकट साप्ताहिक भनेर चिन्दथे । देशान्तरमा म किशुनजीसँग नजिक थिएँ, शिव अधिकारी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समर्थक समूहमा । हामीले काङ्ग्रेसका मामिलामा… Continue reading
विज्ञापन छापेको पेज गायब बनाउन नपाइने : बोर्डले मिडियाका लागि बनाएको आचार संहिता
Posted on October 26, 2021 October 26, 2021 by Salokya
कुनै एउटा कार्यालयले ठेक्काको विज्ञापन छापेको रहेछ। तर त्यो विज्ञापन छापिएको पत्रिका बजारमै पुगेनछ। पत्रिका बीचैमा गायब ! यस्तो कुरा तपाईँले पनि सुन्नुभएको होला। यस्तै खाले समस्या भएर नै होला, विज्ञापन बोर्डले हालै तयार पारेको विज्ञापन आचार संहिता, २०७८ को मस्यौदामा सञ्चार माध्यमले पालना गर्नुपर्न आचार संहितामा त्यसो गर्न नपाइने भनिएको रहेछ। विज्ञापन (नियमन गर्ने)… Continue reading
रवि लामिछाने र ऋषि धमला माओवादीमा प्रवेश : हुँदै नभएको कुराको ‘समाचार’ बनाउनुको रहस्य
Posted on October 21, 2021 October 21, 2021 by Salokya
‘ऋषि धमला र रवि लामिछाने त माओवादीमा प्रवेश गरे रे नि !’ एक परिचितले फेसबुक मेसेन्जरमा मलाई सोधे। ‘कसरी थाहा पाउनु भो?’ मैले सोधेँ। ‘फेसबुकबाट,’ उनको जवाफ ! ‘फेसबुकमा जे लेखियो त्यही पत्याउँदै हिँड्ने हो त’ 🙂 इमोजीसहित मैले जवाफ फर्काएँ। ‘हैन, हैन- रवि लामिछानेको ग्यालेक्सी टिभीकै फेसबुक पेजमा पढेको मैले’, उसले भन्यो, ‘अनि बीबीसीमा… Continue reading
न्युजपेपर होलिडे : कुन पत्रिका कति दिन बन्द हुँदैछ?
Posted on October 13, 2021 by Salokya
नेपालीहरु आफ्नो ठूलो चाड दशैँ मनाउँदै गर्दा ‘न्युजपेपर होलिडे’ पनि सुरु भएको छ। दशैँका यी दिनहरुमा पत्रिकाहरु पनि छापिँदैनन्। पहिले भए यस्तो बेलामा समाचार थाहा पाउन पनि गाह्रो हुने गर्थ्यो। तर अहिले त इलेक्ट्रोनिक मिडियाहरु छन्। रेडियो, टिभी, अनलाइनहरु बन्द हुँदैनन्। विदा पनि यी मिडियाहरुले पालो मिलाएर दिने गर्छन्। त्यसैले समाचारै ब्ल्याक आउट हुने स्थिति… Continue reading
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कोटामा मन्त्री नियुक्त भएको भनेर चर्को आलोचना भएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्रबहादुर हमालले आज राजीनामा दिएका छन्। मन्त्री बनेको तीन दिनमै उनले प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष लिखित राजीनामा बुझाएको भनिएको छ। उनले दिएको ‘राजीनामा प्रधानमन्त्री देउवाले स्वीकृत गरेको’ समाचार पनि आएका छन्। त्यो भने अलि मिलेन। किनभने नेपालको अहिलेको संविधानमा… Continue reading
आइजी छान्‍न भारतीय राजदूतलाई सोध्ने गृहमन्त्री को हुन्? यसरी चिप्लियो ‘कान्तिपुर’
Posted on October 6, 2021 October 6, 2021 by Salokya
विगत केही दिनदेखि एक भारतीयको पुस्तक चर्चामा छ। नेपालमा राजदूत भइसकेका रणजित रायले आफ्नो नेपाल बसाईको अनुभव समेटेर एउटा किताब लेखेका रहेछन्- ‘काठमान्डु डिलेमा : रिसेटिङ इन्डिया-नेपाल टाइज’ नेपाल-भारत सम्बन्धमा एक भारतीयको दृष्टिकोण बारे लेखिएको यो किताबको मिडियामा समीक्षा आउनु पर्नेमा समाचार पो आउन थाल्यो। त्यस्तै एउटा समाचारमा लेखिएको थियो- ‘तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले राजदूत… Continue reading
कान्तिपुरले सोमबार गरेको एउटा गम्भीर गल्ती जुन धेरैले पत्तै पाएनन्
Posted on October 5, 2021 October 5, 2021 by Salokya
तपाईँले असोज १८ गते सोमबारको कान्तिपुर हेर्नुभो? हेर्नुभएको भए एउटा गम्भीर गल्ती थियो त्यसमा पत्ता लाउनु भो? धेरैले यो गल्तीबारे पत्तै पाएनन्। अझ पत्रिका नपढी इपेपर मात्र हेर्नेले त झन् थाहा पाउने कुरै भएन। किनभने इपेपरमा त्यो गल्ती सच्याइएको थियो। तपाईँलाई अचम्म लाग्यो होला, कस्तो गल्ती थियो भनेर। पख्नुस्, म भन्छु नि !
खिच्‍ने एक जनाले, नाम छापिने अर्कैको : कान्तिपुरको अर्को ‘काण्ड’
Posted on September 28, 2021 September 28, 2021 by Salokya
कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा फेरि कपिराइटको अर्को ‘काण्ड’ भएको छ। २०७८ असोज ६ गते इकान्तिपुरमा प्रकाशित एउटा समाचारसँगै राखिएको फोटो आफूले खिचेको भन्दै प्रमाणसहितको दावी पेश गरेका हुन् फोटोग्राफर किशोर शर्माले। इकान्तिपुरमा त्यो दिन ‘द्वन्द्वपीडितलाई उपचार न राहत’ शीर्षकको एउटा समाचार प्रकाशन भएको थियो। समाचारसँगै एउटा फोटो पनि राखिएको थियो जसको क्याप्सनमा लेखिएको थियो- ‘सशस्त्र द्वन्द्वका… Continue reading
आजको कान्तिपुर दैनिक हेर्नुभो ? अगाडिको दुई वटा पेजमा समाचार छैन, विज्ञापन छ। त्यसरी समाचारै नराखी अगाडिको पेजमा राख्ने विज्ञापनलाई प्राविधिक भाषामा ‘ज्याकेट एड’ भनिन्छ। सोझो अर्थमा पत्रिकालाई ज्याकेट लाइदिएको। तर यो ज्याकेट एडका कारण कान्तिपुरलाई मुद्दा लाग्न सक्छ र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्न सक्छ। किन? किनभने यो गैरकानुनी विज्ञापन हो। कान्तिपुरले गैरकानुनी काम… Continue reading
आज संविधान दिवसमा सरकारले बाँडेको पदकको समाचार खुब छाएको छ। पाँच जना पत्रकारले त पदक बहिस्कार पनि गरे। अरु क्षेत्रका क-कसले पदक पाए भन्ने समाचार पनि देखिएको छ- जस्तै कलाकारिता क्षेत्रका, खेलकूद क्षेत्रका, व्यापारव्यवसाय क्षेत्रका। त्यस्तै एउटा समाचार आज देशसञ्चारमा आएको रहेछ- प्रहरी क्षेत्रका पदक पाउनेहरुलाई समेटेर। शीर्षक छ- ‘आइजिपीलाई नै जिल्याउँदै पदक कुम्ल्याउने यी… Continue reading
यी ‘आइए’ वेबसाइटहरु जसले पत्रकार र पत्रकारितालाई बदनाम गर्दैछन्
Posted on September 13, 2021 September 13, 2021 by Salokya
शनिबारदेखि फेसबुकमा एउटा फोटोसहितको पोस्ट भाइरल भएको छ जसमा दावी गरिएको छ- पोखरामा विमान दुर्घटना भएछ अनि त्यसमा ११७ जनाको मृत्यु पनि भयो। मनगढन्ते कहानी कतिसम्म रचिएको छ भने काठमाडौँबाट जनकपुरतर्फ उडेको विमान पोखरा पुगेर दुर्घटना भयो रे। अनि बढीमा १६ जना यात्रु अट्ने टर्बोलेट विमानको फोटो राखेर ११७ जनाको मृत्यु रे। पख्नुस्, पत्रुकार भनेर… Continue reading
बुधबार नेपालका अनलाइन मिडियाहरुमा एउटा गजबको समाचार आयो। लगभग एकै व्यहोराको त्यो समाचारमा कुनै न्युज एजेन्सीलाई कोट गरिएको थिएन। यसको अर्थ त्यो समाचार न्युज एजेन्सीले लेखेको होइन भनेर नै बुझ्नु पर्‍यो। न्युज एजेन्सीको समाचार धेरै वटा मिडियामा आउनु सामान्य हो। तर यो असामान्य खालको थियो किनभने सबै समाचारको बाइलाइनमा त्यही मिडियाको नाम थियो। समाचार थियो… Continue reading
विराटनगरको एउटा अनलाइन ‘आवरविराटनर’ लाई आइएसपी क्लासिक टेकले आफ्नो नेटवर्कमा नचल्ने गरी ‘ब्लक’ गरेको विरोधमा पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रले विज्ञप्ति निकालेर विरोध गरेको बारे माइसंसारमा यसअघि नै ब्लग आइसकेको छ। छुटाउनु भएको भए पढ्नुस्- क्लासिक टेकको गैरसंवैधानिक काम, आफूलाई मन नपरेको समाचार ब्लक गर्ने दुस्साहस। अब पालो इन्टरनेट सेवा… Continue reading